New Archives - UniqueZone Info
မြန်မာလူမျိူးမဟုတ်ပေမဲ့ မြန်မာကိုဝန်ရံအား‌ပေး ခဲ့ကြသည့်‌ ပြည်ပနေမိသားစုလေး… မြန်မာလူမျိူးမဟုတ်ပေမဲ့ မြန်မာကိုဝန်ရံအား‌ပေးခဲ့ကြသည့်‌ ပြည်ပနေမိသားစုလေး…အာဏာသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ မြန်မာ ၊ အာဏာရှင် လက်အောက်က ရုန်းထွက်ကြဖို့ တိုင်းရင်းသာ ညီအစ်ကိုများနဲ့ pdf လူလေးတွေရဲ့ သတိ ၊ နိုင်ငံကို ချစ်တဲ့စိတ် ၊ ကျွန် မဖြစ်ဖို့အရေး ကယ်တင်နေရပါတယ်၊ ဒေါ်လာစျေးတွေ အလီလီ တတ်လာတာတဲ့အမျှ မြန်မာငွေကလည်း
သူမနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခဲ့တဲ့ စစ်သားတွေအတော်များများ သေဆုံးကုန်လို့ ဝမ်းနည်းနေတဲ့ ရွှေရူပါဦး မနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခဲ့တဲ့ စစ်သားတွေအတော်များများ သေဆုံးကုန်လို့ ဝမ်းနည်းနေတဲ့ ရွှေရူပါဦး ပရိသတ်ကြီးရေ ရွှေရူပါဦးက တော့ သူ့ကိုယ်သူ မော်ဒယ်လ်အနေနဲ့ အနုပညာရှင်လမ်းကြောင်းကို စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုနေပေမဲ့ပြည်သူတွေကတော့ သူ့ကို မသိတဲ့သူတွေက များနေပါတယ်နော်။ အချို့ဆို အခုမှကြားဖူးတယ်လို့တောင် ပြောနေကြပါတယ်ရွှေရူပါဦးဟာ သူ့ကိုယ်သူ မော်ဒယ်လ်လို့ ပြောနေပေမဲ့ ပြည်သူတွေကတော့ သူ့ကို
ရိုးရိုးသားသားရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ထဲမှ ငွေကျပ် သိန်း (၁၀၀၀)တိတိကို ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားထံမှာရက်ရက်ရောရောလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မိသားစု မြန်မာပြည်သူလူထုကတော့ အလှူအတန်းရက်ရောပြီး စိတ်သဘောထားပြည့်ဝကြလို့ ဘယ်သူ့ကိုမဆို စေတနာအပြည့်နဲ့ ကူညီပေးတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ပထမလှိုင်းကတည်းက ကြပ်တည်းလာတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးပွါးရေးကလည်း အခုချိန်ထိ ပြန်လည်ဦးမမော့နိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ပြည်သူလူထုက အချင်းချင်းမျှဝေပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မိမိတို့ရဲ့ချွေးနည်းစာထဲကနေ ရက်ရက်ရောရောလှူဒါန်းနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်နေပြည်တော်၊ချင်းရွာမှာနေထိုင်တဲ့ မိသားစုတစ်စုကလည်း ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး သာသနာပြုနိုင်ဖို့အတွက်ငွေကျပ်သိန်း(၁၀၀၀)တိတိကို လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနယ်လှည့်သာသနာပြုလာတာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်လို့ ဒါယကာ၊ဒါယိကာမတွေလည်းပေါများပါတယ်။အခုလိုမျိုး ဆရာတော်ဘုရားကို ကြည်ညိုစွာနဲ့လှူဒါန်းခဲ့တဲ့
လမ်းပေါ်တွင် နှစ်ပေါင်း၂၀ကျော်သည်ထိ အိမ်ခြေရာမဲ့ဘဝကို ရောက်ခဲ့ရသော ကျောင်းဆရာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Cebu Cityရှိ လမ်းပေါ်တွင်သာ နေထိုင်သော Berta အမည်ရှိ အမျိုးသားကြီးတစ်ဦးသည် မိသားစုလည်းမရှိ တစ်ကိုယ်တည်းသမားဖြစ်ပြီး ဖြတ်သွားဖြတ်လာသူများထံမှ စားစရာအချို့တောင်းရမ်းကာ စားသောက်ပြီး အသက်ဆက်ခဲ့သည်။ ထူးခြားစွာဖြင့် အမျိုးသားကြီးသည် တောင်းရမ်းသည့်အခါ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားကိုပြောခဲ့ပြီး အများမှ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ သူတောင်းစားတစ်ယောက်ဖြစ်နေ၍ အထင်မကြီးသည့်အပြင်
သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့် ရဲ့အသက်(၆၉)နှစ်တွင်ဖြစ်လာမယ့်ကံဇာတာဟောစာတမ်း ဗေဒင်ပညာရှင်တစ်ယောက်ကသေချာတွက်ချက်ပြီးဟောလိုက်တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့အသက်(၆၉)နှစ်တွင်ဖြစ်လာမယ့်ကံဇာတာဟောစာတမ်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ကို ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့ကတည်းကေနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ပြည်သူတွေအားလုံးက ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ အမေစုတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် မကြာသေးခင်လောက်ကလူမှုကွန်ယက်တွင်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောစာတမ်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ ဗေဒင်ဆရာမတစ်ဦးမှ ဟောထားတဲ့ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့လက်ရှိကံဇာတာကို သေချာတွက်ချက်ပြီး ဝေမျှပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဦးဝင်းမြင့်ဟာ အသက်(၇၀)ကနေ(၈၁)နှစ်အထိရာဇအရှိန်ရှိနေပါတယ် မြန်မာပြည်အတွက်အဲ့အညံ့ကနေ လွတ်သွားပါပြီဦးဝင်းမြင့်ကတောက်လျှောက်ကိုကောင်းနေတာပါအသက်(၈၀)ကျော်တဲ့အထိပါပဲလို့ သူမရဲ့ဘဘဆရာမှအသေအချာတွက်ချက်ပြီး ဟောထားကြောင်းဝေမျှပေးလာခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကာလမှာ ဦးဝင်းမြင့်မတရားအဖမ်းဆီးခံနေရတာကကံကောင်းသွားခဲ့ပါတယ် အခုလိုအဖမ်းဆီးမခံခဲ့ရပါကရောဂါကြီးတစ်ခုခုစွဲကပ်နိုင်တဲ့ကံဇာတာပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့အတွက်ရောဂါကြီးဖြစ်မယ့်ဘေးကလွတ်ကင်းသွားတဲ့အတွက် ဘာသာရေးလုပ်ဖို့အချိန်ပိုရသွားပြီးအကုသိုလ်လည်းကင်းသွားကြောင်းဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒါ့အပြင်ပြည်သူရွေးချယ်ထားသောမဲနဲ့တက်လာခဲ့တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ဟာအသက်(၈၀)ကျော်အထိအသက်ရှည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ပေးနိုင်မှာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြည်သူတွေအားလုံး စိတ်မပူကြစေဖို့ ဒီဟောစာတမ်းကိုြပြန်လည်ဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းရေးသားပြောပြထားပါသေးတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာပြည်သူတွေအချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီပြီး တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့နဲ့ကိုဗစ်နဲ့အာဏာရှင်လူတစ်စုကိုအနိုင်ယူပြီးနေ့ရက်တိုင်းစိတ်ခွန်အားနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့
ဘုန်းကြီးကျောင်းအောက်မှာ နေရပြီး ကြွက်တွေနဲ့စားစရာမရှိ အခက်အခဲဖြစ်နေရှာတဲ့ အသက်(၉၀)အဖွား
ဘုန်းကြီးကျောင်းအောက်မှာ နေရပြီး ကြွက်တွေနဲ့စားစရာမရှိ အခက်အခဲဖြစ်နေရှာတဲ့ အသက်(၉၀)အဖွား ကျေး…ကျေး…ကျေးဇူးပါ…မုန့်ဟင်းခါးလေး အသုပ်လို စားချင်တယ်။အဖွား အသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ??အသက် (90)နှစ် ရှိပြီ ။ဘာစားချင်လဲ အဖွား ?? ပိုက်ဆံ မရှိလို့ မစားနိုင်ရှာဘူးတဲ့ ။ရော့…အဖွား 50,000 Ks…. ပိုက်ဆံရှိပြီလေ ဘာစားချင်လဲ မေးတော့….မုန့်ဟင်းခါးလေး စားချင်တယ်…မုန့်ဟင်းခါးကို အသုပ်လိုလေး စားချင်တယ်…အဲ့ဒါလေး